Isiokwu dị mma - Vondt.net
Ebe maka akwukwo: edemede di omimi
6 Ihe ịrịba ama na ihe mgbaàmà nke Ọrịa Cancer
21 / 08 / 2016 /0 Comments/i quality Articles/av ewute
6 Ihe ịrịba ama na mgbaàmà nke Ọrịa Brain
Lee akara 6 na akara nke kansa ụbụrụ nke na-enye gị ohere ịmata ọnọdụ ahụ n’oge mmalite ma nweta ọgwụgwọ ziri ezi. Nchoputa nke mbu di oke nkpa iji gbochie oria kansa. Onweghi otu n’ime ihe ịrịba ama ndị a n’onwe ha pụtara na ị nwere ọrịa kansa ụbụrụ, mana ọ bụrụ n’inwee ọtụtụ mgbaàmà ahụ, anyị na-atụ aro ka ị kpọtụrụ ụlọ mberede ma ọ bụ GP maka ndụmọdụ gị. Have nwere ntinye? Enwere ike iji ogige ikwu okwu ma ọ bụ kpọtụrụ anyị na Facebook ma ọ bụ YouTube.
Ihe mgbaàmà nke kansa ụbụrụ nwere ike ịbụ nke akọwapụtara ma karịa karịa. Biko mara na ndepụta a enweghị ụdị mgbaàmà ọ bụla enwere ike ọ nwekwara ike ịbụ n'ihi ihe ndị ọzọ na-abụghị tumor ma ọ bụ kansa ụbụrụ.
1. Isi ọwụwa
Mgbaàmà n'ozuzu nke etuto dị na ụbụrụ nwere ike ịgụnye isi ọwụwa na-adịghị ahụkebe dị ka "isi ọwụwa nkịtị". Isi ọwụwa na-akawanye njọ site n'ịrụ ọrụ na n'isi ụtụtụ. Lezienụ anya ma isi ọwụwa na-emekarị ma jiri nwayọọ nwayọọ na-akawanye njọ.
Ihe na-ebutekarị: Ihe na - akpatakarị isi ọwụwa bụ adịghị arụ ọrụ na akwara na nkwonkwo - nke na - ebute site na ịrụ ọrụ ugboro ugboro, obere mmegharị na ndụ kwa ụbọchị yana nnukwu nrụgide. Chọọ nyocha site na chiropractor ma ọ bụ physiotherapist ma ọ bụrụ na ị na-arịa isi ọwụwa.
2. Mwepụ moto / mmegharị a na-achịkwaghị achịkwa
Na mberede ntughari na ije nke akwara. A na-akpọkwa ya ihe mkpali. Ndị mmadụ nwere ike ịnwe ụdị ọdịdọ dị iche iche.
3. Nausea / vomiting
Ndị mmadụ metụtara nwere ike ịnụ ọgbụgbọ na ọgbụgbọ na-enweghị ezigbo nkọwa maka nke a - dịka ọrịa. Ka ọnọdụ ahụ na-akawanye njọ, ọ nwekwara ike ịpụta ọtụtụ mgbe.
4. Iguzosi ike nsogbu na dizzzz
O di gi ka o adighi nma ma dika ihe nile n’agba gi gburugburu? Ndị mmadụ na-arịa ọrịa ụbụrụ ụbụrụ na-enwekarị isi awọ, isi na-adị ha ka ọ bụ na ha enweghị ike ịhazi onwe ha.
Ihe na-ebutekarị: asedbawanye ụba nwere ike ibute enweghị nguzo na oke ọnya ure. Anyị na-akwado gị ka ị na-egosipụta mgbatị ahụ mgbe niile.
5. Mmetuta mgbanwe
Ndi mmadu emetutara nwere ike ihu ngbanwe na anya, nuru ihe, mmetuta na isi onunu.
Adịghị ala ala ike ọgwụgwụ
Ọ na-adị gị mgbe niile ike gwụ gị? Ike ọgwụgwụ na ike ọgwụgwụ nwere ike ịpụta mgbe ọrịa metụtara ma ọ bụ nchọpụta ọrịa anụ ahụ, mana enwere ike bute ya site na ọnọdụ izugbe dịka nkụda mmụọ na nchekasị.
Ihe mgbaàmà ndị ọzọ nwere ike ịgụnye nghọta ọkụ, aka na ụkwụ oyi, iku ume ngwa ngwa na ọdụdụ. Ọrịa ụdị ụbụrụ pụrụ iche nwere ike ịpụta.
Kedu ihe ị ga - eme ma ọ bụrụ na ị nwere ọrịa kansa ụbụrụ?
- Ọrịa ụbụrụ nwere ike ịbụ ọnọdụ na - eyi ndụ egwu - ọ nwere ike, dị ka ama ama, na-eme n'ụdị na-adịghị mma na nke dị njọ. Ọ bụrụ na ịchọrọ na ị nwere nchoputa a, biko kpọtụrụ ụlọ mberede ma ọ bụ GP gị ozugbo enwere ike maka nyocha na ọgwụgwọ ọzọ.
Isiokwu dị iche iche: - Ọgwụgwọ ọhụụ maka Alzheimer nwere ike iweghachi ọrụ ebe nchekwa zuru oke!
Enwere ike ịkekọrịta isiokwu a na ndị ọrụ ibe, ndị enyi na ndị enyi. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu ihe ọmụma ma ọ bụ ihe ndị yiri ya, anyị na-ajụ gị dị ka ma banye site na Facebook inweta ya. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, ọ bụ naanị ịkpọtụrụ anyị (kpamkpam kpamkpam).
Nweta ọgwụgwọ ugbu a - echela: Nweta enyemaka site n'aka onye dibịa iji chọpụta ihe kpatara ya. Ọ bụ naanị n'ụzọ a ka ị nwere ike ịme usoro ziri ezi iji kpochapụ nsogbu ahụ. Onye dibịa nwere ike inye aka na ọgwụgwọ, ndụmọdụ nri, mmega ahụ ahaziri iche na ịgbatị, yana ndụmọdụ ergonomic iji nye mmezi arụmọrụ yana mgbapụta mgbaàmà. Cheta na ị nwere ike juo anyi (n'amaghị ama ma ọ bụrụ na ịchọrọ) na ndị ụlọọgwụ anyị na-akwụghị ụgwọ ọ bụrụ na achọrọ.
Ị maara: - Ọgwụ oyi nwere ike inye mmerụ ahụ mgbu na nkwonkwo mgbu? Tinyere ihe ndị ọzọ, Ihe nraghachi azụ (ị nwere ike ịtụ ya ebe a), nke mejupụtara ọkachasị nke ngwaahịa sitere n'okike, bụ ngwaahịa ama ama. Kpọtụrụ anyị taa site na ibe Facebook anyị, mgbe ahụ anyị nwere ike ịza ajụjụ ọ bụla ị nwere.
Ọzọkwa gụ: - Mmega 8 maka Ekpere Ọjọọ
Ọzọkwa gụ: - Ọ bụ tendonitis ma ọ bụ tendon INJURY?
Ọzọkwa gụ: - 5 Ezi Omume megide Sciatica
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/hjernekreft.jpg?media=1648573622 400 700 ewute https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 ewute2016-08-21 10:10:052022-03-18 17:27:526 Ihe ịrịba ama na ihe mgbaàmà nke Ọrịa Cancer
6 Ihe iriba ama na nbido nke Meningite
20 / 08 / 2016 /0 Comments/i quality Articles/av ewute
Lee akara 6 na akara nke meningitis nke na-enye gị ohere ịmata ọnọdụ ahụ n’oge mmalite ma nweta ọgwụgwọ ziri ezi. Nchoputa nke mbu di oke nkpa iji gbochie mmepe nke meningitis. Onweghi otu n’ime ihe ịrịba ama ndị a n’onwe ha pụtara na ị nwere meningitis, mana ọ bụrụ n’inwee ọtụtụ mgbaàmà ahụ, anyị na-atụ aro ka ị kpọtụrụ ụlọ mberede ma ọ bụ GP maka ndụmọdụ gị. Have nwere ntinye? Enwere ike iji ubi ikwu okwu ma ọ bụ kpọtụrụ anyị na Facebook ma ọ bụ YouTube.
Mgbuji, nke a makwaara dị ka meningitis, bụ oria / ọrịa nke na - eme n'ime akwara na ụdọ ọkpụkpụ azụ. Ọnọdụ ahụ nwere ike gbasaa ma kara njọ site n'ịhapụ ịgwọ ya. Anyị mara na meningitis mere nje bụ nnọọ obere n'ihe ize ndụ karịa ndị nke nje na-akpata.
Egwuregwu e ji mara ya
Otu n'ime ihe ịrịba ama kachasị ama ama nke meningitis bụ ihe ọkụkụ na-acha uhie uhie nke na-anaghị apụ nwa oge site na nrụgide (dịka site na ịpị iko megide ọkụ ọkụ) - a na-eji ule a iji hụ ma ọ bụ nsị ọbara kpatara nsị ahụ, nke na-eme n'ihi ọrịa ahụ. Akpịrị ahụ na-amalitekarị dị ka obere ntụpọ uhie tupu ya ejiri nwayọọ nwayọọ ghọọ ntụpọ buru ibu ma gbasaa n'ime ahụ niile. O nwere ike isi ike ịhụ na mbido - yabụ chetakwa ịlele ihe ọkụ ọkụ dịka n'ime nkwụ na ọbụ ụkwụ. Ihe ọkụ ọkụ a anaghị eme n'ọnọdụ niile, mana n'ọtụtụ.
2. Ahụ Ikpo Ọkụ
N'ihi ọrịa ahụ, ndị mmadụ ga -ahụ na ahụ na -abanye 'ọnọdụ ọkụ' iji nwaa ịlụ ọgụ na mbufụt. Ahụ ọkụ meningitis ga -adịkarị karịa ogo 37.5.
Ndị mmadụ meningitis metụtara nwere ike ịchọpụta na olu na-akwụgo ma nke ahụ na-aga n'ihu n'ihu (nke na-agbakwunye ụdọ na eriri azụ) siri ike ịrụ.
4. Isi ọwụwa na malaise
N'ihi ọrịa na-aga n'ihu n'ime ahụ, onye ahụ ga-enwe isi ọwụwa mgbe ụfọdụ ma nwee ike ịnụ ma ọgbụgbọ na ahụ adịghị - a ga-agbọ agbọ ka ọnọdụ ahụ na-akawanye njọ.
5. Iwe na ghagbue
Ndị mmadụ na-emetụta nwere ike iwe iwe ma nwetulata ume, yana ọgba aghara / agbanwere ọgụgụ isi.
6. Akwara na nkwonkwo mgbu
Mgbu na nkwonkwo na akwara na-apụta na meningitis. Karịsịa olu nwere ike kpughere.
Ihe mgbaàmà ndị ọzọ nwere ike ịgụnye nghọta ọkụ, aka na ụkwụ oyi, iku ume ngwa ngwa na ọdụdụ.
Kedu ihe ị ga - eme ma ọ bụrụ na ị na - enwe meningitis?
- Meningitis nwere ike bụrụ ihe na - eyi ndụ egwu. Ọ bụrụ na ịchọrọ na ị nwere nchoputa a, biko kpọtụrụ ụlọ mberede ma ọ bụ GP gị ozugbo enwere ike maka nyocha na ọgwụgwọ ọzọ.
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/hjernehinnebetennelse.jpg?media=1648573622 469 750 ewute https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 ewute2016-08-20 13:12:242022-03-18 17:27:496 Ihe iriba ama na nbido nke Meningite
Peeji nke 1 nke 80123>»